Iresiphi engavamile futhi elula: isinkwa se-banana ne-cocoa
Bananaabred yi-batch equkethe izinselele ezimnandi. Okokuqala, yi-dessert. Okwesibili, yi-chocolate. Usengumncane? Kuthiwani ngokuthungwa - okunamanzi, okunomsoco, okunethezeka nokumangalisayo okugcwala? Izithelo zokunambitheka kwamabhanana ziqokonyiswa ngamanothi abhakabhaka we-cocoa omnyama, futhi konke lokhu - ekuhlolweni kokusikeka kwebhayisikili, ukuqubuka emlonyeni. Ngaphezu kwalokho, kuyinto ejabulisayo ukuyipheka: ngokushesha, ngokumane, akukho izinqubo eziyinkimbinkimbi ze-culinary nemikhiqizo yangaphandle.
Umfula - 175 g
I-Soda - 1 tsp.
I-Butter - 115 g
Ukhilimu omuncu (okuqukethwe okungu-15% we-fat) - 130 g
I-cocoa - 60 g
Ibhotela (uma kunesidingo, i-creamy ingashintshwa ngemifino ehlanzekile). Hlanganisa isitsha esisodwa ufulawa, i-cocoa, ushukela kanye nosawoti omuncu, bese ufaka i-soda. Ukuze kube nokukhanya okukhulu nokunethezeka kokunambitheka, kufanelekile ukuthatha esikhundleni soshukela omhlophe obomvu, futhi i-cocoa evamile ishintshwe nge-alkalized emnyama. Esikhundleni se-ukhilimu omuncu, ungasebenzisa futhi i-yogurt noma ukhilimu we-fat fat content
Faka engxenyeni eyomile i-emulsion yamafutha, amaqanda nama-banana tincetu. Uma udinga i-dessert eyengeziwe "i-viscous", thatha izithelo ezithe xaxa, uma zikhulu kakhulu - zivuthiwe. Ubhanana kufanele kube mnandi - ngakho ukunambitheka kwabo ukunambitheka kuhambisana nenhlama ye-chocolate
Hlanganisa noma shaya i-mixer kuze kube yilapho ibushelelezi futhi ibukeka kahle
Lungisa ifomu (mhlawumbe elide nelelingxenyeni): lisibe ngaphakathi ngaphakathi nebhotela, ufafaze ufulawa uphinde ugxume okudlulele
Beka inhlama ibe isikhunta, ushiye amamitha amabili ububanzi. Sika ama-banana tincetu bese ubeka phakathi nendawo yomsebenzi
Bhaka kuhhavini elushisayo ngaphambi kwama-degree angama-160 kuze kube yilapho usulungele, uhlola ikhekhe nge-skewer. Vumela i-dessert iphuze kancane phezu kwe-grate
Gcoba isinkwa esifudumele nefilimu, ngaphandle kokukhipha isikhunta. Shiya i-bananaabrad usuku olulodwa efrijini - ukuze ibhisikidi ingabi namanzi amaningi
Ezihlukahlukene zokupheka ama-saladi enkukhu
Sipheka izitsha nge-add soy sauce
Izindlela zokupheka ezinhle kakhulu zamabhilidi asekhaya
Okuhlwabusayo futhi kulula ukupheka inyama izitsha
I-appetizer ebonakalayo noma epheka ama-squid ku-batter
Ukupheka kokudla okuphansi kwekhalori kuyatholakala
Ingabe ubulili bomlomo buyingozi?
Indlela yokukhetha inja nokuqonda ukuthi ingokwakho?
Indlela yokuthunga i-jumpsuit yenja
Umsebenzi womzimba ngesikhathi sokukhulelwa
Ukubuthwa kwe-clitoris: izimbangela nokuphathwa kwesifo esingathandeki
Ama-coat oatmeal ngaphandle kokubhaka
Ama-sandwich aneamaqanda aqhephukile, isipinashi kanye noshizi
Ingaphakathi ku-Art Nouveau isitayela - izitayela-2016
I-grillage ne-pine nati
Isaladi «Amandla olwandle»
I-recipe enomnandi ye-dessert: Amakhukhi e-Vuci "I-velvet elibomvu"
Inja ikhiqiza isiNgisi Cocker Spaniel
Lezi puzzle puzzle abantu abadala bahlekisa futhi kwenziwa ukucabanga
Mhlawumbe i-seagull? Kuwusizo futhi kumnandi